तेरियाको जन्म दिन शुभ अवसर तेश्रो लाइवमा नेपाली हरु यसरी खनिय ! के के भनिन त् उनले - Enepalese.com
तेरियाको जन्म दिन शुभ अवसर तेश्रो लाइवमा नेपाली हरु यसरी खनिय ! के के भनिन त् उनले
इनेप्लिज २०७५ साउन २८ गते ०:३२ मा प्रकाशित
तेरिया मगर जस्ले चाही नेपाली र नेपाल को नाम नेपाल मा मात्रेइ हैन भारत मा पनि फैल्याइन आज नेपाल म धेरै चारचित रहेकी छिन । उनले २०१४-२०१५ मा भारत को ठुलो रियालिटी सो जस्लाई डि आइ डि भनेर चिनिन्थ्यो , त्यहाँ उस्ले जित हसिल पारेकी थिइन । त्यसेइ गरी २०१५ म उनले झालक डिख्ह्ला जा भन्ने सो मा पनि जित हासिल गरेकी थिइन ।
उनले जितेको सो हरु भारत को ठुलो सो हरु हुन र उनले हामी नेपाली र नेपाल को मन सम्मान अझेइ बढाएकी छिन । त्यो जितेको सो हरुमा उनले नृत्य गरेर जित हासिल पारेकी थिईन् । तर उनि नृत्य मा मात्रेइ हैन गित गाउँन पनि उतिकेइ जान्ने रैछिन। नाच्न मात्र हैन गाउन पनि उतिकै सिपालुछिन तेरिया मगर । तेरिया मगर आफ्नो जन्म दिनको सुभ अवसर पारेर सामाजिक संजाल मार्फत अहिले सम्मको उनको तेश्रो लाइवमा दर्शक स्रोता हरुको मन जित्न सफल भएकी छन । उनि यसै लाइव भिडियो मार्फत अहिलेको उनको अवस्था र आउदो समयमा उनि कुन कुन देश प्रोग्रामको लागी जाने पनि जानकारी दिएकी छन ।
बाकी भिडियो यहाँ बाट हेर्नुहोला: